Future of Work ဘလော့ဂ်ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာအလုပ်၏အနာဂတ်နှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံးအပေါ်ရေးသားချက်များကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
အားဖြင့်ရှာရန် နေ့စှဲ နေ့စွဲကို Select လုပ်ပါ ဒီဇင်ဘာလတွင် 6, 2021 နိုဝင်ဘာလ 22, 2021 အောက်တိုဘာလ 12, 2021 စက်တင်ဘာလ 16, 2021 သြဂုတ်လ 4, 2021 ဇြန္လ 7, 2021 မေလ 12, 2021 ဧပြီလ 13, 2021 မတ်လ 24, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2021 ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2020 နိုဝင်ဘာလ 18, 2020 အောက်တိုဘာလ 22, 2020 အောက်တိုဘာလ 8, 2020 သြဂုတ်လ 27, 2020 သြဂုတ်လ 18, 2020 ဇူလိုင်လ 7, 2020 မေလ 22, 2020 ဧပြီလ 21, 2020 ဧပြီလ 13, 2020 မတ်လ 31, 2020 မတ်လ 25, 2020 မတ်လ 16, 2020 မတ်လ 13, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 4, 2020 ဇန်နဝါရီလ 2, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 19, 2019 နိုဝင်ဘာလ 25, 2019 နိုဝင်ဘာလ 19, 2019 နိုဝင်ဘာလ 14, 2019 နိုဝင်ဘာလ 4, 2019 အောက်တိုဘာလ 24, 2019 အောက်တိုဘာလ 6, 2019 စက်တင်ဘာလ 18, 2019 စက်တင်ဘာလ 5, 2019 သြဂုတ်လ 29, 2019 သြဂုတ်လ 17, 2019 ဇူလိုင်လ 23, 2019 ဇူလိုင်လ 4, 2019 ဇူလိုင်လ 2, 2019 ဇြန္လ 21, 2019 ဇြန္လ 14, 2019 မေလ 27, 2019 မေလ 6, 2019 ဧပြီလ 23, 2019 ဧပြီလ 11, 2019 မတ်လ 25, 2019 မတ်လ 12, 2019 မတ်လ 11, 2019 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2019 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 14, 2019 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 5, 2019 ဇန်နဝါရီလ 29, 2019 ဇန်နဝါရီလ 15, 2019 ဇန်နဝါရီလ 3, 2019 ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2018 ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2018 နိုဝင်ဘာလ 20, 2018 နိုဝင်ဘာလ 6, 2018 အောက်တိုဘာလ 30, 2018 အောက်တိုဘာလ 14, 2018 စက်တင်ဘာလ 29, 2018 စက်တင်ဘာလ 19, 2018 စက်တင်ဘာလ 12, 2018 စက်တင်ဘာလ 5, 2018 သြဂုတ်လ 27, 2018 သြဂုတ်လ 17, 2018 သြဂုတ်လ 1, 2018 ဇူလိုင်လ 26, 2018 ဇူလိုင်လ 23, 2018 ဇူလိုင်လ 11, 2018 ဇူလိုင်လ 9, 2018 ဇြန္လ 28, 2018 မေလ 21, 2018 ဧပြီလ 26, 2018 ဧပြီလ 11, 2018 မတ်လ 20, 2018 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2018 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2018 ဇန်နဝါရီလ 31, 2018 ဇန်နဝါရီလ 9, 2018 ဇန်နဝါရီလ 3, 2018 ဒီဇင်ဘာလတွင် 11, 2017 ဒီဇင်ဘာလတွင် 4, 2017 နိုဝင်ဘာလ 11, 2017 အောက်တိုဘာလ 23, 2017 အောက်တိုဘာလ 16, 2017 စက်တင်ဘာလ 12, 2017 စက်တင်ဘာလ 7, 2017 သြဂုတ်လ 25, 2017 ဇူလိုင်လ 26, 2017 ဇူလိုင်လ 19, 2017 ဇြန္လ 15, 2017 ဇြန္လ 7, 2017 မေလ 23, 2017 မေလ 4, 2017 မေလ 2, 2017 ဧပြီလ 18, 2017 ဧပြီလ 5, 2017 မတ်လ 21, 2017 မတ်လ 10, 2017 မတ်လ 1, 2017 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2017 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2017 ဇန်နဝါရီလ 17, 2017 ဇန်နဝါရီလ 6, 2017 ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2016 ဒီဇင်ဘာလတွင် 9, 2016 နိုဝင်ဘာလ 21, 2016 နိုဝင်ဘာလ 16, 2016 အောက်တိုဘာလ 28, 2016 အောက်တိုဘာလ 12, 2016 အောက်တိုဘာလ 3, 2016 စက်တင်ဘာလ 23, 2016 စက်တင်ဘာလ 14, 2016 သြဂုတ်လ 22, 2016 သြဂုတ်လ 12, 2016 ဇူလိုင်လ 19, 2016 ဇြန္လ 28, 2016 ဇြန္လ 22, 2016 ဇြန္လ 13, 2016 မေလ 17, 2016 မေလ 12, 2016 မေလ 2, 2016 ဧပြီလ 25, 2016 ဧပြီလ 7, 2016 မတ်လ 29, 2016 မတ်လ 14, 2016 မတ်လ 12, 2016 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2016 ဇန်နဝါရီလ 19, 2016 ဇန်နဝါရီလ 17, 2016 ဒီဇင်ဘာလတွင် 29, 2015 ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2015 ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2015 နိုဝင်ဘာလ 27, 2015 နိုဝင်ဘာလ 23, 2015 နိုဝင်ဘာလ 19, 2015 နိုဝင်ဘာလ 9, 2015 အောက်တိုဘာလ 14, 2015 စက်တင်ဘာလ 16, 2015 သြဂုတ်လ 28, 2015 သြဂုတ်လ 14, 2015 သြဂုတ်လ 6, 2015 ဇူလိုင်လ 27, 2015 ဇူလိုင်လ 15, 2015 ဇြန္လ 10, 2015 မေလ 11, 2015 ဧပြီလ 1, 2015 မတ်လ 23, 2015 မတ်လ 11, 2015 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2015 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 3, 2015 ဇန်နဝါရီလ 18, 2015 ဒီဇင်ဘာလတွင် 23, 2014 ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2014 အောက်တိုဘာလ 29, 2014 အောက်တိုဘာလ 24, 2014 အောက်တိုဘာလ 8, 2014 အောက်တိုဘာလ 3, 2014 စက်တင်ဘာလ 9, 2014 စက်တင်ဘာလ 4, 2014 သြဂုတ်လ 29, 2014 သြဂုတ်လ 28, 2014 သြဂုတ်လ 27, 2014 ဇြန္လ 25, 2014 ဇြန္လ 12, 2014 မေလ 25, 2014 မေလ 16, 2014 မေလ 15, 2014 မေလ 13, 2014 မေလ 8, 2014 ဧပြီလ 24, 2014 ဧပြီလ 17, 2014 ဧပြီလ 14, 2014 ဧပြီလ 11, 2014 မတ်လ 28, 2014 မတ်လ 19, 2014 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2014 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2014 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 4, 2014 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 3, 2014 ဇန်နဝါရီလ 16, 2014 ဒီဇင်ဘာလတွင် 6, 2013 နိုဝင်ဘာလ 14, 2013 နိုဝင်ဘာလ 8, 2013 စက်တင်ဘာလ 19, 2013 စက်တင်ဘာလ 16, 2013 စက်တင်ဘာလ 5, 2013 သြဂုတ်လ 22, 2013 သြဂုတ်လ 18, 2013 ဇူလိုင်လ 20, 2013 မေလ 20, 2013 ဧပြီလ 20, 2013 မတ်လ 20, 2013 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2013 ဇန်နဝါရီလ 20, 2013 ဒီဇင်ဘာလတွင် 23, 2012 ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2012 နိုဝင်ဘာလ 23, 2012 နိုဝင်ဘာလ 20, 2012 အောက်တိုဘာလ 20, 2012 စက်တင်ဘာလ 20, 2012 သြဂုတ်လ 20, 2012 ဇူလိုင်လ 23, 2012 ဇူလိုင်လ 20, 2012 ဇြန္လ 20, 2012 မေလ 20, 2012 ဧပြီလ 20, 2012 မတ်လ 20, 2012 မတ်လ 3, 2012 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2012 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2012 ဇန်နဝါရီလ 28, 2012 ဇန်နဝါရီလ 23, 2012 ဇန်နဝါရီလ 21, 2012 ဇန်နဝါရီလ 20, 2012 ဇန်နဝါရီလ 19, 2012 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2011 ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2011 နိုဝင်ဘာလ 20, 2011 အောက်တိုဘာလ 20, 2011 စက်တင်ဘာလ 20, 2011 သြဂုတ်လ 20, 2011 ဇူလိုင်လ 20, 2011 ဇြန္လ 20, 2011 မေလ 20, 2011 မတ်လ 20, 2011
အားဖြင့်ရှာရန် အမျိုးအစား Category ေရြးပါရွေးချယ်မှု၏ 1 အလုပ်ခွင်3 မျိုးဆက်များဆောင်းပါးအကောင်းဆုံးဘလော့ဂ်များဘ‌‌လော့ခ်စီးပွားရေးစီအီးအို Solutionsခေါင်းဆောင်မှုပြောင်းပါပြောင်းလဲမှုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးဆက်များအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုပြောင်းလဲပါသတိထားစီးပွားရေးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ခေါင်းဆောင်မှုအလုပ်၏အနာဂတ်ကမ္ဘာတလွှားမှ Gen Y ၏မျိုးဆက် Xမျိုးဆက် Y ကိုမျိုးဆက်များနှင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းခွင်၌မျိုးဆက်များအလုပ်ခွင်၌ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းခွင်၌ဆန်းသစ်တီထွင်မှုလူ့စွမ်းရည်ကိုဖော်ထုတ်ရန်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်နည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ခြင်းခေါင်းဆောင်မှုအတိုင်ပင်ခံခေါင်းဆောင်မှုမဟာဗျူဟာများခေါင်းဆောင်မှုသိကောင်းစရာများတစ် ဦး ပြောင်းလဲနေတဲ့အလုပ်ခွင် ဦး ဆောင်တစ် ဦး Multigenerational အလုပ်ခွင် ဦး ဆောင်အဆိုပါမျိုးဆက်များ ဦး ဆောင်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ် Visuals2020 လုပ်ငန်းခွင်လူကြိုက်ရေစီးကြောင်းUncategorizedသင်၏ Leader OS ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ
22 ခုနှစ်အတွက် လမ်းကြောင်း 2022 ခု
2021 ခုနှစ်တွင် မကြုံစဖူးသော ပြောင်းလဲမှုပမာဏတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ NextMapping တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 22 ခုနှစ်အတွက် Trends 2022 ခုကို သုတေသနပြုထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီတိုင်းသည် ဘဝပြောင်းလဲမှုနှင့် အလုပ်အပြောင်းအလဲ နှစ်မျိုးလုံးရှိကြပါသည်။ ပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းခွင်မှာ ရုံးပြန်တက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်ပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရာထူးက အပြည့် […]
ကျေးဇူးသိစိတ်သဘောထားသည် ခံနိုင်ရည်အားတည်ဆောက်ပုံအကြောင်း မကြာသေးမီက သင်ခန်းစာတစ်ခုရခဲ့ပါသည်။ နောက်နေ့ကျတော့ US ကနေ ကနေဒါကို ခရီးထွက်တယ်။ US ကိုရောက်ဖို့အတွက် ကျွန်မမှာ Covid test ရှိတယ်၊ ကနေဒါကိုပြန်လာဖို့ ကျွန်မမှာ Covid test လုပ်ပြီး လေဆိပ်ကိုရောက်တဲ့အခါ […]
Hybrid လုပ်ငန်းခွင်သည်ဒီမှာနေရန်ရှိသည်၊ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ပြိုင်လုပ်ငန်းခွင်ဗီဒီယိုဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းခွင်အကြောင်းပြောသောအခါ၎င်းသည်အရွယ်အစားတစ်ခုတည်းနှင့်လုံးဝမကိုက်ညီပါ။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအားပေါင်းစပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမရှိပါ။ အချို့ကုမ္ပဏီများသည် ၀ န်ထမ်းအားလုံးရုံးခန်းတစ်ခု (သို့) […]
အလုပ်သမားများ၏စိတ်တွင်အရာတစ်ခုရှိသည် - အထူးသဖြင့်ခေါင်းဆောင်များသည်ပေါင်းစပ်ထားသောလုပ်ငန်းခွင်တွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုမည်သို့ဖြေလျော့ပေးသနည်း။ ကုမ္ပဏီအများစုသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှ စတင်၍ ၎င်းတို့၏လုပ်သားများအတွက်ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုကိုစီစဉ်ကြသည်။ ယခုလက်ရှိအသုံးများနေသော hybrid ပုံစံသည် 'ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အလုပ်ခွင်' ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် […]
NextMapping တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇွန်လစစ်တမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာစာရင်းပေးသွင်းသူများအားသူတို့ပေါင်းစပ်ထားသောလုပ်ငန်းခွင်အကြောင်းနှင့်သူတို့ရုံးပြန်ရောက်သောအခါသူတို့ဘာလိုချင်တာလဲဆိုတာကိုမေးမြန်းသည်။ COVID Delta ပုံစံကွဲ၏နောက်ဆုံးတိုးလာမှုမတိုင်မီစစ်တမ်းကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာကစီစဉ်ရန် […]
Hybrid အသင်းများကို ဦး ဆောင်သည်
ဇြန္လ 7, 2021
ကူးစက်ရောဂါပြန့်ပွားမှုနောက်ပိုင်းတွင်ခေါင်းဆောင်များကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာ 'ဦး ဆောင်သည့်မျိုးစပ်အဖွဲ့များ' ဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်မဖြစ်မီကြိုတင်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ခြင်းသည်အစဉ်အလာအရဆက်လက် ဦး ဆောင်နေပြီး၊ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားသောအခါ၎င်းသည်အနာဂတ်၏ဝေးလံခေါင်ဖျားသောအလုပ်၏အဖြစ်မှန်ကိုအရှိန်မြှင့်စေသည်။ ကပ်ရောဂါမဖြစ်ပွားမီကကုမ္ပဏီများစွာက […]
ခေါင်းဆောင်များသည်အသင်းများကိုဆက်လက်ပါ ၀ င်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလူ့စွမ်းရည်များလိုအပ်သည်
ကျွန်တော်တို့ဟာအလုပ်သမား ၁၀၀၀ ကျော်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီး“ မင်းတို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမင်းကိုစေ့စပ်ထားဖို့ဘာလိုအပ်တယ်ထင်သလဲ” လို့သူတို့ကိုမေးခဲ့တယ်။ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သူများ၏ ၉၄% ကျော်ကခေါင်းဆောင်များသည်အဖွဲ့များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလူ့စွမ်းရည်များ (ပျော့သောကျွမ်းကျင်မှုဟုလည်းခေါ်သည်) လိုအပ်သည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ အတိတ်ကာလ […]
မျိုးဆက် Covid နှင့်အနာဂတ်
မျိုးဆက်သစ် Covid နှင့်အနာဂတ်……မြို့တွင်မျိုးဆက်သစ်တစ်ခုရှိသည်။ Generation Covid ဟုလည်းလူသိများသော Gen C ဟုခေါ်သောအသက် ၂၀ နှစ်အောက်လူငယ်များပါဝင်သည်။ သင်သည်အခြားမျိုးဆက်များနှင့်ရင်းနှီးကောင်းရှိနိုင်သည် - Gen Z ၁၉၉၇ မှ ၂၀၂၀ (ဆိုရှယ်မီဒီယာမျိုးဆက်အဖြစ်သိသည်) Millenials ၁၉၈၁ မှ ၁၉၉၆ (လူသိများ […]
Pandemic မှသင်ယူသောခေါင်းဆောင်မှုသင်ခန်းစာ ၅ ခု
ပြီးခဲ့သည့်လအနည်းငယ်အတွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးမှခေါင်းဆောင်များကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကိုရောဂါကူးစက်မှုမှရရှိခဲ့သောခေါင်းဆောင်မှုသင်ခန်းစာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ခေါင်းဆောင်များထံမှကြားသိရသည့်အချက်မှာ ၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၁ အထိသင်ယူမှုများစွာရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့ခေါင်းဆောင်များသည် […] ကြောင့်ရရှိခဲ့သောသင်ခန်းစာများကိုပင်စဉ်းစားရန်မလိုခဲ့
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောအလုပ်သမားများအတွက်စစ်တမ်းများစွာကိုကောက်ယူခဲ့ပြီးဝေးလံခေါင်ဖျားသောအလုပ်သမားများ၏အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကိုပြုစုခဲ့သည်။ နညျးလမျးမြားစှာတှငျ ၂၀၂၀ အကွောငျးသှားသောအခါ 'ပုံမှန်' သို့ပြန်သွားမည်ဟူသောသဘောမျိုးရှိလိမ့်မည်ဟုအထွေထွေသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်။ ဒီနေ့စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်းသာမန်အားဖြင့်မည်သို့ပင်ပုံမှန်စံအသစ်တစ်ခုရှိကြောင်းထင်ရှားသည်။
21 အတွက် NextMapping လုပ်ငန်းခွင်လမ်းကြောင်းများ
ဒီနှစ်မှာ 21 အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 2021 NextMapping Workplace Trends ကို slideshare မှတဆင့်မျှဝေပါမယ်။ Covid19 နှင့် ၂၀၂၀ သည်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်လိုပုံအပေါ်အမြဲသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါ၏ရလဒ်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရမည့်လူမှုရေးအပြောင်းအလဲများ၏အစသာဖြစ်သည်။
ဤတွင် 2021 ခုနှစ်တွင်ရှေ့သို့မျှော်ကြည့်ဖို့အဘယျသို့ပါပဲ
ဤတွင် 2021 ခုနှစ်တွင်မျှော်လင့်ရမည့်အရာဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာကြီးသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည် - ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ပုံ၊ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ပုံ၊ အနာဂတ်ကိုကြည့်ရှုခြင်း။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်စိတ်ဖိစီးမှုအချို့ကိုခံစားနေရသည်ဟုအားလုံးသဘောတူနိုင်သည်။ လူဖြစ်ရန်ဟူသည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုခံစားရန်ဖြစ်သည်။ The […]
သင်သိသောအရာကိုအတွက် 2020 သင်ကန်ခဲ့သလဲ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဘုံလူသားကိုမည်သို့အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ဤသည်ကယူမှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မင်းအကြောင်းကိုမင်းမသိဘူးဒါပေမယ့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကဘောင်းဘီရှည်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ကန်သွင်းမှုပဲ။ ကူးစက်ရောဂါ၏စိတ်ဖိစီးမှုသည်လူအများအပြားကိုပျက်စီးစေသကဲ့သို့ […]
အောက်တိုဘာလ 8, 2020
ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုစတင်ကတည်းက 'ပုံမှန်ပုံမှန်' အသစ်အကြောင်းပြောဆိုမှုတွေအများကြီးကြားခဲ့ရတယ်။ အဖြစ်မှန်တွင်မည်သည့်အရာကပုံမှန်အသစ်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုမည်သူမျှမသိ။ အခုငါတို့လူမှုရေးတော်လှန်ရေးကိုဖြတ်သန်းနေရတယ်။ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုသည်အလုပ်သမားများကိုတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်မည်သည့်အလုပ်ကိုဆိုလိုသည်ကိုပြန်လည်အကဲဖြတ်စေသည်။ အလုပ်ရှင်များ [... ] လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်
အာမခံဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက် - အဝေးမှအလုပ်လုပ်ရန်နည်းလမ်း ၅ ချက်
အာမခံဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက် - Crystal Metz ၏အဝေးမှ post ည့်သည်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်နည်းလမ်း ၅ ခု - Crystal သည်ပိုမိုအောင်မြင်မှုအတွက်နောက်ထပ်မည်သည့်အရာများကိုအောင်မြင်စွာဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အတူတွဲဖက်လုပ်ကိုင်သောအသိအမှတ်ပြု NextMapping Entrepreneur Coach ဖြစ်သည်။ အဝေးမှအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ သင်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်း၊ ၀ န်ထမ်းများအားစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များကိုအိမ်မှပျော်စေခြင်းစသည်တို့သည်ပြောရန်ခက်ခဲသည်။
အသုံးအများဆုံး WFH (Home From Work) စိန်ခေါ်မှုများအတွက်ခေါင်းဆောင်မှု Hack ၅
ဒီဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အသုံးအများဆုံး WFH (အိမ်မှအလုပ်) စိန်ခေါ်မှုများအတွက်ခေါင်းဆောင်မှု hack ၅ ခုကိုမျှဝေသည်။ မကြာသေးမီကစီအီးအိုတစ် ဦး နှင့် Zoom ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွင်ရောဂါကူးစက်မှုအတွင်းသူနှင့်သူမ၏ခေါင်းဆောင်များအားညအချိန်တွင်မစောင့်ရှောက်နိုင်သည့်အရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ သူနှင့်သူမ၏ခေါင်းဆောင်များရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုများမှာအတော်လေးတူညီကြသည် […]
ပြင်းထန်သောမသေချာမရေရာမှုအခြေအနေများတွင်ရှင်သန်ရန်ခေါင်းဆောင်များအားသူတို့၏အလုပ်သမားများကိုထောက်ပံ့နိုင်သည့်နည်းလမ်း (၈) ချက်ရှိသည်။ မကြာသေးမီက ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး ကသူမသည်အဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန်ရုန်းကန်နေရသည်ဟုဝေမျှခဲ့သည် သူမအနေဖြင့်သူမ၏အလုပ်သမားများအားအာရုံစူးစိုက်ရန်နှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းရန်အတွက်စိန်ခေါ်ခံခဲ့ရကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့သည်။ […] အားလုံးနှင့်အောင်မြင်စွာကိုင်တွယ်နိုင်သည့် playbook မရှိပါ။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည် Zync အေဂျင်စီများမှ podcast စီးရီးတွင်aည့်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအလုပ်၏အနာဂတ်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်၏စွမ်းအားအကြောင်းပြောခဲ့သည်။
ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် Covid-19 ပြတ်တောက်မှုတွင်မည်သို့ ဦး ဆောင်မည်နည်း
ဧပြီလ 21, 2020
မနေ့ကငါ Covid-19 အနှောင့်အယှက်အတွက်ခေါင်းဆောင်များမှ ဦး ဆောင်လမ်းပြလျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုမေးခဲ့သည်မနေ့က
Coronavirus - အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ဘယ်လိုခံစားရလဲ။
ဧပြီလ 13, 2020
အများပြည်သူကိုမေးမြန်းသည့်စစ်တမ်းမေးခွန်းတစ်ခုကို -“ coronavirus အလယ်မှာမင်းအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုခံစားရလဲ။ အချက်အလက်များသည်လာနေပြီးသင်စစ်တမ်းကောက်ပြီးသည်နှင့်ရလဒ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပဏာမတုံ့ပြန်မှုများကိုမျှဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မေးမြန်းခဲ့သည့်မေးခွန်းများတွင် - […]
အနာဂတ်ဝါဒီအားလုံးသည်ပြတ်တောက်မှုများနှင့်ပြတ်တောက်မှုများအတွက်အသင့်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြောဆိုကြသည်။ သေချာသည့်အနှောင့်အယှက်တစ်ခုမှာ Coronavirus သည်အလုပ်၏အနာဂတ်ကိုအရှိန်မြှင့်ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ လူများသည်အဝေးမှအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်လာသောအခါစိန်ခေါ်မှုအသစ်များပေါ်ပေါက်လာပြီးစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းသစ်များပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည် Coronavirus နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်လွှမ်းမိုးမှုသည်နေ့စဉ်နှင့်တစ်ပြေးညီ […]
Online Online Course - ပြောင်းလဲမှုမြန်နှုန်းဖြင့်မည်ကဲ့သို့တီထွင်ရမည်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်“ မြန်ဆန်စွာပြောင်းလဲခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့ဖန်တီးရမည်နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်ရမည်နည်း” ဟူသောအွန်လိုင်းသင်ခန်းစာအသစ်ကိုထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားပါသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Top Talent ကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏အနာဂတ်ကိုသင်တန်းတက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောင်းလဲမှုမြန်ဆန်မှုတွင်မည်ကဲ့သို့တီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်ပုံနှင့်သင်တန်းအသစ်သည်ခေါင်းဆောင်များ၊ အသင်း ၀ င်များအားကူညီရန်ရည်ရွယ်သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အဝေးမှအလုပ်များမြင့်တက်လာခြင်း - သင့်ကုမ္ပဏီတွင်၎င်းကိုမည်သို့အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်သနည်း
ဤအရာကိုကျွန်ုပ်ရေးသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည် coronavirus ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုအလယ်တွင်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောအလုပ်များတိုးပွားလာနေသည်။ ကျောင်းများပိတ်သွားပြီ၊ စားသောက်ဆိုင်များပိတ်နေပြီသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသာထုတ်ယူနိုင်သည်။ Apple ကဲ့သို့လက်လီရောင်းချသူများကစတိုးဆိုင်များကိုပိတ်ထားကြပြီး၊ 2020 နှစ် […]
အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုသက်သာစေရန် PREDICT Model ကိုအသုံးပြုပါ
မတ်လ 13, 2020
ငါတို့ဟာ Covid-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့နေရာမှာရှိနေပြီးလူတိုင်းကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်။ လူတိုင်းကကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကမျက်စိမမြင်ဘဲခံစားနေရတယ်။ အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုသက်သာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သော PREDICT model ကဲ့သို့သောကိရိယာများကိုသုံးနိုင်သည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ အစည်းအဝေးလုပ်ငန်းနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်စက်မှုလုပ်ငန်းတိုင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
MindValley မှ Jason Campbell က Cheryl Cran ကိုအင်တာဗျူးပြီးအနာဂတ်အနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်မိမိကိုယ်ကိုခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီအင်တာဗျူးရဲ့အသံအပြည့်အစုံကိုနားထောင်ဖို့ဒီကိုသွားပါ။ Jason: ဒီမှာ Cheryl Cran ရှိတယ်။ အိုး၊ ငါတို့အနာဂတ်အနာဂတ်အလုပ်အကြောင်းပြောမယ်၊ အနာဂတ်ဟာ […]
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 4, 2020
ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံ၏အနာဂတ်ကဘာလဲ? လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်များတန်ဖိုးထားသည့်ညီလာခံများပြုလုပ်နေသည့်နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကွန်ဖရင့်များ၏အဓိကအာရုံစိုက်မှုမှာနည်းပညာကုမ္ပဏီများမှဖောက်သည်များအားသူတို့၏နည်းပညာကိုမြှင့်တင်ရန်ကိရိယာအသစ်များနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုပေးအပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်များအတွက်အဓိကအချက်အခြာကိုကျွန်ုပ်အားမေးမြန်းခြင်းခံရသည်။
ဇန်နဝါရီလ 2, 2020
၎င်းသည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု၏အစဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ သည်မိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်သည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသင်းအဖွဲ့ကစားသမားများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောခေါင်းဆောင်များဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်ကိုတိုးမြှင့်ရန်အချိန်တန်ပြီ။ သင်အဲဒါ၏အရေးကြီးမှုကိုသင်ခံစားနိုင်ပါသလား? အနာဂတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မလား?
2019M ကို NextMapping မှာကျင်းပခြင်း
2019 နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့ NextMapping တွင်ဤနေရာ၌ကျင်းပနေကြသည်။ 2019 ခုနှစ်တွင်ငါ့စာအုပ် "NextMapping - မျှော်လင့်ထား, သွားလာနှင့်အလုပ်၏အနာဂတ်အနာဂတ်ဖန်တီး" နှင့်ဖေဖော်ဝါရီလ2ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလိမ့်မည်ဟုပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာအုပ်စာအုပ်နှင့်အတူဒုတိယထုတ်ဝေဖန်တီးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံဖောက်သည် shared ခေါင်းဆောင်မှုလက်ခံအသုံးပြုပုံ 2020 ခုနှစ်တွင်သူတို့၏အောင်မြင်မှုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အတွင်း […]
ဒီဂျစ်တယ်၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် PREDICT ပုံစံ Chris Rainey နှင့်အင်တာဗျူးများ Cheryl Cran
နိုဝင်ဘာလ 25, 2019
ဒီကနေ့မှာ HRleaders.com ကိုတည်ထောင်သူ Chris Rainey ကအနာဂတ်၊ အလုပ်၊ ဒီဂျစ်တယ်၊ ပြောင်းလဲမှုနှင့်ကျွန်ုပ်၏“ NextMapping - အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်အလုပ်ကိုဖန်တီးရန်” စာအုပ်မှ PREDICT မော်ဒယ်လ်နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုခံယူရတာကျေနပ်မိသည်။ အင်တာဗျူးသည်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသောအနာဂတ်နှင့်အဓိကအားဖြင့် PREDICT ပုံစံကိုခေါင်းဆောင်များမည်သို့အသုံးချနိုင်မည်ကိုအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ 19, 2019
NextMapping တွင်ထောင်နှင့်ချီသောခေါင်းဆောင်များကိုကျွန်ုပ်တို့စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်များရင်ဆိုင်နေရသောထိပ်တန်းပြissuesနာတစ်ခုမှာ“ ၀ န်ထမ်းများမည်သို့ထိတွေ့ဆက်ဆံရမည်နည်း” ဖြစ်သည်။ ကနေဒါတစ်လျှောက် BMO Bank of Montreal အတွက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဗန်ကူးဗား၊ မွန်ထရီရယ်နှင့်တိုရွန်တိုသို့ခရီးထွက်ခဲ့ကြသည်။ အလုပ်၏အနာဂတ်ကိုအဓိကထားခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ 14, 2019
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာ (၂၀၂၀) အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ၂၀၂၀ ၏အနာဂတ်အနာဂတ်အတွက်အလားအလာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုအလေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သောခေတ်ရေစီးကြောင်းများထဲမှတစ်ခုမှာဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းခြင်းကို 'လူများ၏မှန်ဘီလူးများ' ပါဝင်သည်။ ပထမ။ ကျွန်ုပ်တို့စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည့်ခေါင်းဆောင်များက […]
နိုဝင်ဘာလ 4, 2019
ကျွန်ုပ်တို့သည်ထောင်နှင့်ချီသောခေါင်းဆောင်များကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီးထိပ်တန်းစိန်ခေါ်မှုများအနက်တစ်ခုမှာ - အလုပ်ခွင်၌သံသယကင်းခြင်းကိုမည်သို့ရပ်တန့်မည်နည်း။ NextMapping စစ်တမ်းနည်းပညာနှင့်စီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုများအရှိန်အဟုန်မြင့်မားသောအရှိန်အဟုန်ကြောင့်အလုပ်သမားများအားအနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်ခက်ခဲစေသည်။ အလုပ်သမားများသည် ဆက်လက်၍ ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူစိန်ခေါ်ခံရပြီးသူတို့၏ခေါင်းဆောင်များကိုမယုံကြည်ပါ။
“ Soft Skills” မရှိတော့ပြီလား။
အောက်တိုဘာလ 24, 2019
“ ပျော့ပျောင်းသောစွမ်းရည်” ဟူသောဝေါဟာရသည်အားနည်းခြင်း (သို့) မရှိမဖြစ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်။ ငါမစ်ရှင်အပေါ်ဖြစ်၏ ငါဆယ်စုနှစ်ကျော်ကဒီမစ်ရှင်အပေါ်ပါပြီ! မင်းငါ့ကိုလာမယ်လို့ငါမျှော်လင့်နေတယ် ရည်ရွယ်ချက်မှာ“ ပျော့ပျောင်းသောစွမ်းရည်” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကို“ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော […] ကဲ့သို့သောဝေါဟာရအသစ်ဖြင့်အစားထိုးရန်ဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာလ 6, 2019
Crystal Ball မရှိပါ။ တီထွင်သူများသိသောလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုမှာ - အနာဂတ်ကိုပုံစံများကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ အာဗြဟံလင်ကွန်းက“ အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်” ဟုပြောခဲ့သည်။ NextMapping တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံစံများကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ရန်ကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်စာအုပ်ထဲတွင်“ NextMapping - မျှော်လင့်ပါ၊ […]
ကျွန်ုပ်သည် Minneapolis လေဆိပ်မှ ၀ န်ထမ်းများနေရာချထားသည့်စက်မှုလုပ်ငန်းရှိဖောက်သည်များ၊ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှဖောက်သည်များနှင့်ဖက်ဒရယ်အစိုးရမှ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက်အချက်အချာကျသောစာတန်းများကိုရေးသားပြီးစီးခဲ့သည်။ ဤစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီသည်မတူကွဲပြားပုံရသည်နှင့်မတူသော်လည်းအမှန်တရားမှာမူတစ်ခုတည်းသောထူးခြားသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် […]
စက်တင်ဘာလ 5, 2019
အနာဂတ်၏လုပ်သားအင်အားသည်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်သောလုပ်သားအင်အားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမေးခွန်းထုတ်စရာမရှိပါ။ အနာဂတ်၏လုပ်သားအင်အားသည်ယနေ့ထက်ယနေ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားနေသည်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတော်များများသည်အလုပ်နေရာများ၏အနာဂတ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အပြောင်းအလဲများကိုညွှန်ပြနေသည်။ ကျွန်ုပ်စာအုပ်ထဲတွင်“ NextMapping - အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့်ဖန်တီးခြင်း […]
အနာဂတ်တွင်ပုလ် & ineတ္စရိုက်လက္ခဏာများရှိသောခေါင်းဆောင်များလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအလွန်အရေးကြီးသောအချိန်နှင့်နေရာတွင်ရှိသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေး၌ဖြစ်စေယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်လုံး၏ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ကြီးမားသောခေါင်းဆောင်မှုဥပမာများကိုနေ့တိုင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ […] အတိတ်ကာလ၏ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းများသည်အဓိကအားဖြင့်ပုဂ်္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့လူတွေမင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုယုံသလား။ ဟုတ်ကဲ့ဟုဖြေပါကသင်၏ကုမ္ပဏီသည်အနာဂတ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်မှုယဉ်ကျေးမှုတွင်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှုန်းနှင့်အခြားအကျိုးကျေးဇူးများရှိကြောင်းသိပ္ပံကျောထောက်နောက်ခံပြုသုတေသနပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဟားဗတ်သုတေသီတစ် ဦး ဖြစ်သော Paul J. Zak သည်ယုံကြည်မှု၊ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် […] အကြားဆက်နွယ်မှုကိုသုတေသနပြုခဲ့သည်။
အာမခံအပါအ ၀ င်စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာသည်အနာဂတ်လုပ်ငန်းခွင်အာမခံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည့်ပြောင်းလဲမှုများကိုလျင်မြန်စွာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေကြသည်။ AI၊ အလိုအလျောက်စက်ရုပ်၊ စက်ရုပ်၊ အလုပ်သမားများ၏သဘောထားပြောင်းလဲခြင်းသည်အာမခံ၏အနာဂတ်ကိုလျင်မြန်စွာသက်ရောက်စေသည်။ ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်ရှုထောင့်မျိုးစုံရှိနိုင်သောစွမ်းရည်ကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်မှုများရရှိရန်လိုအပ်သည်။ ခေါင်းဆောင်များသည် ဦး ဆောင်နိုင်ရမည်။
အနာဂတ်အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်နည်း - Amber Mac နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
Cheryl Cran: Amber Mac ကို guest ည့်သည်တော်ဖြစ်စေခြင်းငှာယနေ့ကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ Amber ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်သင်၏နောက်ခံကိုမျှဝေပါ Amber Mac: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်နှစ် ၂၀ နီးပါးအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာရှိတဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီငယ်လေးမှာပေါင်းပင်တွေထဲကိုငါထွက်လာခဲ့တယ်။ ငါမှာသတင်းစာပညာရှိတယ်။
ဘယ်လို Flux ၏ Times သတင်းစာများတွင် Flex ရန်
ဇြန္လ 21, 2019
သင်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူရေလွှမ်းမိုးနေပါသလား အသင်းထဲဝင်ပါ။ ငါတို့ရှိသမျှသည် flux ကာလ၌မည်သို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူမှာပိုကောင်းရဖို့အလွန်အရေးကြီးသည်သောအချိန်၌ရှိ၏။ 'flex' ၏အဓိပ္ပာယ်ရွှေ့ပြောင်းရန်သို့မဟုတ်တင်းမာရန် 'flux' ၏အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက် 'ပြောင်းလဲမှု' အတွက်အဓိပ္ပာယ်တူပြောင်းလဲမှုအရှိန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်နေသောသတင်းအချက်အလက် […]
12... 75 next>
အလုပ်၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းနှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုရယူပါ။